Frequently asked questions about staying at home (isiXhosa) | Covid-19 Response
Frequently asked questions about staying at home (isiXhosa)
Kuthetha ukuthini ukubekelwa bucala?
Ukubekelwa bucala kuthetha ukuzikhetha kwabanye njengenyathelo lokuthintela ukuze bangosuleleki ixesha elimiselweyo.
Yindlela esebenzayo yokunceda ukukhusela abo bakungqongileyo - usapho lwakho, izihlobo kunye noogxa bakho- kwiCovid-19.
Njengenxalenye yokuvaleleka ngendlu sonke kufuneka sihlale emakhaya kwaye siwashiye amakhaya kuphela ukuba kubaluleke kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba uzibekele bucala, kufuneka ubaphephe abanye abantu kangangoko unako, hlala ekhaya ungaphumi uyokuthenga ukutya okanye uyokuthatha amayeza—enza i-odolo ngomnxeba okanye kwi-Intanethi, okanye ucele omnye umntu ukuba azozishiya kwikhaya lakho.
Sukusebenzisa izithuthi zikawonkewonke, iiteksi okanye iindlela ezifanayo zothutho ngexesha lakho lokuzibekela bucala. Ungasisebenzisa isithuthi sakho kodwa nceda nyina uhambo kolo lubalulekileyo.
Ungasebenzisa isitiya sakho, ukuba unaso. Ungayishiya indlu ukuya kuzilolonga-kodwa ube kwiimitha ezi-1.5 (amanyathelo ama-3) kude nabanye abantu.
Ngubani ekufuneka abekelwe bucala?
Wonke umntu uyacelwa ukuba ahlale ekhaya apho kunokwenzeka, nangona kunjalo, kuya kufuneka uhlale ekhaya iintsuku ezili-10 kwaye uzibekele bucala ukuba uneempawu okanye uvavanyelwe iCovid-19 okanye kwiintsuku ezili-14 ukuba uhlala nomntu oneCovid-19.
Sifuna ukuba nawuphi na umntu ovela kulo naliphi na ilizwe laphesheya (engozini enkulu okanye engekho ngozini) kwizibuko lokungena eNtshona Koloni kufuneka azibekele bucala iintsuku ezili-14.
Ukuba awuqinisekanga ukuba ufuna ukuhlala ekhaya, kwaye uneempawu zeCovid-19 (ubushushu obuphezulu okanye ukukhohlela okutsha okanye okuqhubekayo), nceda tsalela umnxeba wephondo kule nombolo 021 928 4102 ngengcebiso malunga nento ekufuneka uyenze ngokulandelayo . Nceda uhlale ufumana uluvo lwesibini ukuba uxhalabile.
Kufuneka ndenze njani ukuba ndifuna uncedo ngezempilo ngelixesha ndihleli ekhaya?
Phantsi kwexesha lokumiswa ngxi kwezinto, ungalishiya ikhaya uye kubonana nogqirha, ikhemisti okanye esibhedlela. Ukuba uzikhethile uhlala wedwa, ukukhusela abanye, musa ukuya kwiindawo ezifana noogqirha, ikhemisti nesibhedlela.
Hlala ekhaya usebenzise iprovincial hotline engu 021 928 4102 ukuba uziva ungakwazi kunyamezela nezi mpawu ekhaya okanye imeko yakho iya iba mandundu. Ukuba ufuna uncedo lwezempilo olungenanto yakwenza necoronavirus, tsalela ku- 10111.
Ndingenza njani ukuze kubelula ukuhlala ekhaya?
Ukuhlala ekhaya kunganeminye imiqobo, kodwa zikhona izinto onokuzenza ezingenza ixesha lokumiswa ngxi kwezinto kube lula:
Thetha nomqeshi wakho, abahlobo kunye nosapho bacele uncedo ngezinto oza kuzifuna ethubeni
Thetha nomqeshi wakho uve ukuba unganako na ukusebenzela ekhaya ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto
Cinga ngezinto, cwangcisa ukuba ungazifumana njani izinto ezifana nokutya neendawo zamayeza
Ukuba ufuna ukufumana izinto ngexesha usekhaya, cela abahlobo nosapho bazise zonke izinto oza kuzifuna, okanye unga-oda
Qiniseka ukuba izinto eziziswayo ngedilivari zishiywa ngaphandle ukuze wena uzithathe
Unganxulumana nabahlobo, usapho usbenzisa umnxeba, okanye ezinye iindlela ezifana nevideo okanye ezokuncokola
Ukuzilolonga kubalulekile kwimpilo yakho. Khangela iklasi ezi online ezinokukunceda wenze imithambo elula ekhaya
Ungaya phandle kodwa kufuneka ungadibani nabantu – hlala kude kangangeemitha eziyi 1.5 kwabanye abantu
Ukuba unayo igadi, kulungile ukuba ulungise yona, njengoko uza kube ukude namanye amalungu osapho lwakho.
Ndingakucutha njani ukunwenwa konikezelwano ekhaya?
Njengoko uhleli ekhaya, ufanele wenze oku:
hlamba izandla zakho ngesepha namanzi rhoqo, kangangemizuzwana engama-20
sebenzisa isanithayiza yezandla eyi-jel ukuba amanzi nesepha azikho
gquma umlomo kunye nempumlo ngethishu okanye ngomkhono wakho (hayi ngesandla) xa ukhohlela okanye uthimla
lahla iithishu emgqomeni emva kokuyisebenzisa wakugqiba uhlambe izandla
coca izinto okanye indawo othe wayibamba rhoqo (ezifana nomqheba wecango, iketile, kunye neminxeba) sebenzisa izicoci ezikulungeleyo oko
Ndingakucutha njani ukusondela ebantwini endihlala nabo ukuba ndineCovid-19 okanye ndiyazikrokrela ukuba ndinganayo?
Kufuneka uzikhethe uhlale wedwa apho ekhaya. Cutha ukusondela kwabo uhlala nabo. Ufanele ukuba ulala wedwa. Thetha nosapho lwakho malunga nalamalungiselelo okulala wedwa.
Ungalali kwindawo yomntu wonke. Zama ukuhlala kwigumbi elineventilethazi nefestile evulekayo. Zama ukusoloko uyivulile ifestile ngamaxesha onke ukuze kungene umoya oku kunceda ukugcina umoya ococekileyo ungene ngaphakathi kweligumbi lakho.
Cutha ixesha lokuba sendaweni nabanye abantu, ezifana nendlu yangasese, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala, zigcine ezindawo zicocekile zinomoya ongenayo.
Kufuneka ndenze ntoni ukuba ndizibekele bucala ndibe ndihlala nomntu osemngciphekweni?
Ukuba uzibekele bucala kwaye uhlala nomntu oneminyaka engama-70 okanye ngaphezulu, onemeko yexesha elide, ukhulelwe okanye unamajoni omzimba abuthathaka, zama ukubalungiselela ukuba bahlale nabahlobo okanye usapho ngeli thuba lakho lokuzibekela bucala. (singacebisa ukuba banxibelelane nathi malunga nemibuzo nolwazi apha?) Ewe, ukuba kufuneka nihlale ekhaya kunye, zama ukuba kude omnye komnye kangangoko.
Zama ukugcina umgama oyi-1.5 yeemitha phakathi kwenu
Kuphephe ukusebenzisa indawo ekwabelwana ngayo, njengasekhitshini okanye igumbi lokuhlambela, ngexesha elinye omnye nomnye
Vula iifestile kwiindawo ekwabelwana ngazo ukuba unako
Coca igumbi lokuhlambela enabelana ngalo ngalo loke ixesha ulisebenzisa, umzekelo ngokusula umphezulu owuchukumisileyo
Hlamba impahla kunye nezitya ngokohlukeneyo kwabanye ekhayeni lakho.
Ungabelani ngebhedi, ukuba kunokwenzeka
Ungabelani ngetawuli, kubandakanya iitawuli zesandla kunye neetawuli zeti, amalaphu okuhlamba okanye ilineni yebhedi
Ungabelani ngezitya neglasi zokusela, iikomityi okanye izixhobo zokutyela nabanye abantu kwikhaya lakho.
Ungabelani ngokutya neziselo. Umntu othile ekhayeni yakho unokulungiselela ukutya kwakho, kodwa akufuneki ulungiselele abanye ukutya.
Ndinganazo iindwendwe ekhaya?
Sukumema okanye uvumele abantu bazokubuthela, abantu abafana nezihlobo nosapho bangene ekhayeni lakho, ingakumbi xa uzikhethile uhlala wedwa.
Ukuba ufuna ukuthetha nomntu ongelilo usapho lwakho, sebenzisa umnxeba okanye ezinye iindlela zokunxibelelana.
Ungakuvumeli ukubaneendwendwe ekhayeni lakho, kodwa ke kulungile ukuba nabahlobo okanye usapho okanye umqhubi ozise ukutya okanye izinto ezithile.
Qiniseka ukuba izinto eziziswa ngedilivari zishiywa phandle ukuze wena uzithathe khona.
Ndiyicoca njani indlu yam, ukulahla inkukuma okanye ukuhlamba impahla xa ndizibekele bucala?
Sebenzisa iimveliso zakho eziqhelekileyo zekhaya, ezinje ngesicoci kunye nebhlitshi, xa ucoca ikhaya lakho.
Inkunkuma yakho yasekhaya kufuneka ifakwe kwibhegi eziphindwe kabini kwaye igcinwe elangeni ixesha elingangeentsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 phambi kokuyifaka kumgqomo wenkunkuma wesiqhelo iqokelelwe ngumasipala.
Lahla enye inkunkuma yasekhaya njengesiqhelo.
Hlamba impahla yakho kumatshini wokuhlamba ngendlela eqhelekileyo. Impahla ebisondele kumntu ogulayo ingahlanjwa nezinye impahla zabantu. Sukuyihlukuhla impahla engcolileyo, kuba oku kungasasaza intsholongwane emoyeni. Kunokuba lula ukuba omnye umntu asonge kwaye abeke iimpahla ezicocekileyo (ezinjengeetawuli kunye neetawuli zeti) kwaye akunike ubonelelo.
Ukuba awunamatshini wokuhlamba, linda ezinye iiyure ezingama-72 emva kwexesha lokubekelwa bucala liphele ngaphambi kokuba uthathe impahla yakho uyise kwindawo yokuhlamba iimpahla.
Ndingayigcina njani impilo yam intle ngelixesha ndisekhaya?
Ukuzinceda hlala usempilweni ngeli xesha usekhaya:
sela amanzi amaninzi aza kugcina ungomanga- wasele kakhulu ukuze umchamo wakho ube mhlophe
sela iipilisi zentlungu ukuze uncede iimpawu
Qhagamshelana nezihlobo nosapho ngomnxeba okanye nakwi-social media, ukuze uncedakale ungabinesithukuthezi uzive uwedwa
zigcine uxakekile- zama izinto ezifana nokupheka, ukufunda, ukufunda ku-online nokubukela ifilim
yenza imithambo elula, ukuba uziva unako ukwenza njalo.